Ngwunye ọkụ na -agbanwe agbanwe: ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ, ihe ọ bụ maka | Ngwaike efu
Ike ọkọnọ na -agbanwe agbanwe: gịnị ka ọ bụ, kedu ka ọ si arụ ọrụ, gịnị ka ọ bụ
Isaac | 14/09/2021 09:00 | Ihe eletrọniki
Otu n'ime ihe ndị kacha agbanwe agbanwe na ihe dị mkpa maka ụlọ ihe nkiri elektrọnik ma ọ bụ ogbako ọ bụla bụ ọkụ ọkụ ọkụ. Site na ya ị nwere ike zụọ ụdị sekit niile, na -enwe ike itinye voltaji na ike dị iche iche nke a na -ahazi ngwa ngwa. Yabụ ị nwere ike chefuo ndị ọzọ batrị ma ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ kpọmkwem maka sekit ọ bụla.
una ọkọnọ ike eluigwe na ala maka ọrụ gị niile. Na mgbakwunye, a naghị eji ya naanị ike sekit, ị nwekwara ike iji ya dị ka ngwa ule, ebe ị ga -enwe ike ịhụ ma ọ bụrụ na componente ma ọ bụ sekit na -arụ ọrụ nke ọma mgbe i jiri ntụnye nyocha ya metụ ya aka ...
1 Kedu ihe bụ ọkụ eletrik na -agbacha agbacha?
1.1 Otu esi ahọrọ ezigbo mkpụrụedemede na -agbada agbagharị
2 Ọdịmma ọkụ na -enye ọkụ dị mma
Kedu ihe bụ ọkụ eletrik na -agbacha agbacha?
Na ihe bụ ike ọkọnọ, yana ụkpụrụ ọrụ, anyị ekwuola na blọọgụ a. Agbanyeghị, mgbe ọ bịara na a ọkụ ọkụ ọkụ, O nwere ntakịrị ihe dị iche na nke ndị nkịtị.
Igwe ọkụ bụ ngwaọrụ nwere ike ịnye ọkụ eletrik na sekit ma ọ bụ akụrụngwa. Ọ dị mma, mgbe ị na -ekwu maka isi iyi na -agbachapụ agbachapụ, ọ bụ otu n'ime ya Enwere ike ịhazigharị voltaji n'ime oke ụfọdụ, yana kwa ebili mmiri. Yabụ na ị gaghị enwe nrụpụta arụnyere nke 3v3, 5v, 12v, wdg, mana ị nwere ike họrọ ike ịchọrọ.
Otu esi ahọrọ ezigbo mkpụrụedemede na -agbada agbagharị
Ka ịhọrọ ezigbo ọkụ ọkụ na -enye ọkụ, ị ga -aga ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịtụle. Yabụ ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ga -adabara gị mkpa:
Ego: ihe mbụ bụ ikpebi ego ole ịchọrọ imefu na ọkụ ọkụ gị na -agbanwe agbanwe, ebe ọ bụ na otu a ka ị nwere ike gaa n'ụdị ụdị wee kpochapụ ihe niile na -agaghị ekwe omume.
MkpaIhe na -esote bụ ịchọpụta ihe ị ga -eji ọkụ eletrik gị na -enwu enwu maka, ma ọ bụrụ na ọ bụ maka onye na -eme oge ma ọ bụ ọrụ DIY, ma ọ bụ ọ bụrụ maka ụlọ nyocha ọkachamara, maka iji ọkachamara na ụlọ ọrụ elektrọnik, wdg. Nke a ga -ekpebi ma ịchọrọ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na ọnụ karịa, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ike nwee afọ ojuju na nke dị mfe.
Eke: enwere ọtụtụ ụdị dị iche karịa ndị ọzọ. Ma ị kwesịghịkwa ịna -echegbu onwe gị na ya. Mgbe niile, ọ bụrụ na ọ bụ akara ama ama, ị ga-enwe nkwa dị mma karịa na nkwado ka mma ma ọ bụrụ na ihe emee.
Nka na ụzụ: Nke a bụ nkeonwe, ọ ga -adabere n'ihe ị na -achọ. Mana chee echiche banyere ụdị voltaji na ebili mmiri nke ị na -achọkarị, iji dabara nke ahụ. Ike akwadoro (W) ga -adịkwa mkpa.
Ọdịmma ọkụ na -enye ọkụ dị mma
Ọ bụrụ na ị na-ele anya a ọma dimmable ike ọkọnọ, ebe a ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ụdị na ụdị kachasị atụ aro:
PeakTech 1525: bụ akara a pụrụ ịdabere na ya ma dị ike nke na -enye ọkụ ọkụ. Ihe nlereanya a nwere ike ịdị site na 1-16 volts nke ugbu a, yana site na 0-40A siri ike, n'agbanyeghị na enwere ụdị ndị ọzọ dị oke ọnụ nwere ike iru 60A. O nwere ihuenyo LED ebe ị nwere ike gụọ voltaji ugbu a na ụkpụrụ dị ugbu a, yana sistemụ jụrụ oyi nwere ọgụgụ isi na -eji fan, yana 3 atọrọ atọ.
Baugger Wanptek Nps1203W: ụdị ọzọ kachasị mma nke isi mmalite, nwere ikike mmepụta 0-120v DC, na 0-3A. Site na ngosipụta dijitalụ ka ị nwee ike ịhụ nke ọma ụkpụrụ enyere, nha kọmpat, nchekwa yana yana njikwa ntuziaka dị mfe.
Igodo nri. Ọ gụnyere ngosipụta dijitalụ iji lelee ụkpụrụ ọkọnọ, enwere ike ịhazi ya site na 0-30 volts na 0-10 amps nke ugbu a.
Uniroi DC: Isi mmalite a na -enye ohere ngbanwe site na 0 ruo 32 volts, yana site na 0 ruo 10.2 amps. Site na nkenke mgbanwe nke 0.01v na 0.001A. Na nnukwu, kọmpat ngosi LED, njikwa okpomọkụ nwere ọgụgụ isi, na ntụkwasị obi nke ukwuu.
Nkume RockSeed RS305P: ọkụ na-agbanwe agbanwe nwere ikike nhazigharị nke 0-30V, na 0-5A. Site na iji ọnụọgụ ọnụọgụ anọ, ngosipụta LED nke nwere setịpụrụ 4, ntọala dị elu, ebe nchekwa, na ike ijikọ na PC site na eriri USB iji jikọọ na ngwanrọ dakọtara na Windows.
Hanmatek HM305: Font dị ka nke gara aga, nwere obere kọmpat, dị mfe na ọnụ ala. Gụnyere ihuenyo LED iji lelee ụkpụrụ dị ugbu a na voltaji. Ọ na-enye ohere ngbanwe dị mfe nke voltaji n'etiti 0-30V na nke dị n'etiti 0-5A. Enwere ụdị ndị ọzọ nwere ike iru 10A.
Kaiweets cc. Ọ nwere ike ịga site na 0 ruo 30V yana site na 0 ruo 10A. Ọ nwekwara ihe ngosi LED yana ọdụ ụgbọ USB ike 5v / 2A.
EventekỌ bụ otu n'ime ụdị kacha mma nke ọkụ na -enye ọkụ na -apụ apụ, na ọnụ ahịa ya mara mma nke ukwuu. Ihe nlereanya a na -enye ohere iwu site na 0 ruo 30 volts, yana site na 0 ruo 10 amps. Site na nnukwu ngosipụta ọnụọgụ 4 nke LED, nha kọmpat, ntụkwasị obi na nchekwa, yana eriri agịga / ahịrị ule gụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Ike ọkọnọ na -agbanwe agbanwe: gịnị ka ọ bụ, kedu ka ọ si arụ ọrụ, gịnị ka ọ bụ
Oge Faraday: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgwọ ọkụ
Ogwe ndọta ndọta: ngwa amabeghị na nke bara uru